192.168.8.250 - အက်မင်ဝင်ရန် - Username နှင့် Password
ပုဂ္ဂလိက 192.168.8.250 IP ရှင်းပြချက် IP လိပ်စာ 192.168.8.250 သည် span တွင်ရှိသည် 192.168.8.1 - 192.168.8.255။ ဒီလိပ်စာအကွာအဝေးကို Home ကွန်ယက်များကအသုံးပြုသည်။ မည်သည့် gadget တွင်မဆို router သည် 192.168.8.250 (Ipads, laptops, Home PC, Cell phones, etc) ကိုလူသားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိပဲသတ်မှတ်နိုင်သည်။
192.168.8.1 - 192.168.8.255 အိုင်ပီကျသော IP အကွာအဝေး 192.168.8.250 RFC 1918 ၏စံသတ်မှတ်ချက်အရကိုယ်ပိုင် IP အကွာအဝေး၏အပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၂.၁၈၈.၂၅၀ ကဲ့သို့တူညီသောလိပ်စာများသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မျှဝေခြင်းမရှိပါ။ အကယ်၍ ပုဂ္ဂလိကကွန်ယက်များကိုသုံးပါက gateway သို့မဟုတ် proxy server ကိုအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။
အကြောင်းကြားအဖြစ်, 192.168.8.250 IP သည် class C ကွန်ယက်များ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒီကွန်ယက်ကနေနေကြတယ် 192.168.0.0 - 192.168.255.255။ ၎င်းသည်စုစုပေါင်းရရှိနိုင်သောအိုင်ပီလိပ်စာ 65,535 ကိုရရှိသည်။ Router များနှင့်အတူဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်၎င်းအကွာအဝေးကိုသီးခြားကွန်ယက်များတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည် 192.168.8.1, 192.168.0.1, 192.168.1.1, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်လိပ်စာများအဖြစ်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤကွန်ယက်ကိုသင်၏လက်ပ်တော့များ၊ tabs များ၊ ဖုန်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မိလျှင်သို့မဟုတ်ဤဥပမာတွင် IP address ကို 192.168.8.250 ရရှိလိမ့်မည်။
ဘရောက်ဇာနှင့်အတူ router အားလုံးရရှိနိုင်ပါသည်;
သင့်ရဲ့ browser ကိုရိုက်ထည့်ပါ https://192.168.8.250 သင့်ရဲ့ router များ၏ IP address ကိုလျှင် 192.168.8.250.
ပုံမှန်အသုံးပြုသောအသုံးပြုသူများအပြင်စကားဝှက်များသည်“1234““admin ရဲ့“ သို့မဟုတ်”nil"။
192.168.8.250 သည်သင်၏ router IP မဟုတ်ပါက
အကယ်၍ IP address သည်သင်၏ router IP မဟုတ်ပါက Ipconfig ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ပြန်လည်ရယူနိုင်သည် router IP (အဆင်သင့် Windows အတွက်၊ Linux အတွက်သာမက config ကိုသုံးလျှင် Mac ကိုသုံးသည်) ။
တွန်းထိုး စတင်, နှိပ်ပါ ပွေးသှားထည့်သွင်းပါcmd" & တွန်းထိုး ဝင်ရောက် သော့
ဝင်ရောက် config ကို နှင့်တွန်းပါ ဝင်ရောက်.
router အသုံးပြုသူအမည်များနှင့် password များစာရင်း။
router ရဲ့လျှင် အသုံးပြုသူစကားဝှက် ဂရိတ်ပြောင်းလဲမထားပါဘူး စာရင်းကသင့်အားပုံမှန်ခွင့်ပြုချက်ပေးသည်။ စာရင်းနှင့်အတူရုံသင်၏ router ကိုရှာပါ။
router IP စီမံအုပ်ချုပ်သူစကားဝှက်များလည်းပါဝင်သည် 192.168.8.250 Login IP ဆိုသည်မှာ Linksys နှင့်အခြား network label များကဲ့သို့သော router များသည် entry point သို့မဟုတ် gateway အနေဖြင့်အသုံးပြုသော IP address ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်ကွန်ယက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကွန်ယက်များနှင့် router များအားပြင်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုရန်အတွက်ဤလိပ်စာတွင် router admin entry ကိုစတင်သည်။